Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Ny volam-bahoaka ihany no anajan’ny Hvm azy
Inty sy nday: Ny volam-bahoaka ihany no anajan’ny Hvm azy
Isan’ny raharaha mamoehitra nefa tsy azo ikombonam-bava, ary tena tokony ho fady ny manaiky lembenana aminy ity fampiasan’ny mpitondra fanjakana ny fahefam-panjakana hampahoriana ny vahoaka Malagasy ity. Toraka izany koa ny volam-panjakana izay ilalaovana ny fiainan’izy vahoaka. Ny fitaovam-panjakana enti-milalao ny ainy. Ny mpiasam-panjakana sy ny mpitandro filalminana ampiasain’ny mpitondra hamoretana ny vahoaka. Nalaza tato ho ato ny hoe “kolikoly avo lenta”, izay voamarika hatrany fa volam-bahoaka no lalaovin’izy ireo amin’izany, fa misy tranga hafa koa azo itarafana ny fihetsika mamoa-fady amin’ny soatoavin’ny fitantanan-draharaham-panjakana izay vitan’ny Hvm. Tena nandova ny nataon’ny mpitondra teto nandritra ny 55 taona ny Hvm, raha izay manokana no asian-teny.
Tany amin’ny fitondrana Repoblika voalohany tany sy ny Repoblika faharoa tany no fandre ny hoe “tsy mahita ravina avaratra amin’ny fitondrana foibe raha tsy Pisodia na raha tsy Arema”. Mbola nahazo vahana koa anefa izay nandritra ny Repoblika fahatelo, na faha-Undd izany na faha-Homanisma Ekôlôjika-n-dRatsiraka na faha-Tim Ravalomanana.
Matoa nitolona ny vahoaka ka nanangana izao Repoblika fahefatra izao dia ny mba hidirana sy hampiharana ny tena fanovana. Rehefa nahazo ny fahefam-panjakana anefa ny Hvm dia ny nampikolay ny vahoaka hatramin’ny Repoblika voalohany ihany no mbola mampikaikaika ny maro, ary vao mainka aza mihamafy ny vaikan’izany satria miha-henjana ny manjo ny ambanilanitra.
Ny tranga iray tsy azo iadian-kevitra ankehitriny, satria miharihary toy ny kary an’efitra ary hitam-poko, hitam-pirenena toy ny tafika andrefan-tanàna, dia ny fanakendan’ny fitondrana Hvm ny haino aman-jerim-panjakana (Rnm-TVm), tahaka ny nataon’ny Pisodia sy ny Arema mbamin’ny Tim ihany e! Na olom-boafidy toy ny solombava aza dia tsy mahita mangirana ao. Izay no isan’ny antony nahatonga an’ireo solombavambahoaka miisa 73 avy amin’ny Tim sy Mapar mbamin’ny Mmm sy ny tsy miankina, nitaky tamin’ny minisitra ny Fifandraisana, Harry Laurent Rahajason, mba ho afaka miteny sy manambara ny heviny ary mampahafantatra ny vahoaka Malagasy ny asa notanterahin’izy ireo teny amin’ny Antenimierampirenena.
Hatreto dia mbola iharan’ny fanavakavahana avo lenta anefa ireo olom-boafidy ampolony maro ireo. Ny solombava mpanohana ny fitondrana anefa dia tena mifandimby, andro aman’alina, maneho hevitra ao.
Etsy ankilany, isan’ny fitakiana nataon’ireo solombavambahoaka 73 nitsipaka ny volavolan-dalàm-pifidianana nampandanian’ny Hvm an-keriny sy amboletra koa ny hisitrahan’ny faritra nahavoafidy azy ireo ny teti-bola avy amin’ny “CCPREAS” izay enti-manatanteraka tetik’asa ara-tsosialy sy ara-pampandrosoana any amin’ny faritra. Ny vahoaka Malagasy any amin’ireny distrika sy kaominina nahavoafidy an’ireo depiote avy amin’ny Mapar sy Tim ary Mmm sy tsy miankina mahatratra 73 ireo no voakendan’ny Hvm sy ataony takalon’aina, ka tsy navelany hisitraka izany teti-bola izany. Vola izay tsy an-dRajaonarimampianina na an’ny Praiminisitra na an’ny minisitra ny Vola na vokatry ny lovany na navelan’ny razambeny ho azy fa volam-bahoaka, ka nahoana no tsy mahazo misitraka izany ireo vahoaka izay loharano nipoiran’izany vola izany. Ny volany ihany no anajan’ny mpitondra azy ary ny fitaovana an’ny vahoaka (TVm-Rnm) ihany no ilalaovany ny fahefam-panjakana.
Izany no taratra ny fomba fitondran’ny mpanao jadona sy mpanampatra fahefana, sao tsy fantatsika vahoaka.